Wasiir Puntland oo ku baaqay dagaal ka dhan ah Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe – Mareeg.com: Wasiir ka tirsan maamulka Puntland ayaa shacabka deegaanadaas ugu baaqay iney la dagaallamaan maamulka Somaliland oo dhawaan qabsaday degmada Taleex ee gobolka Sool.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland, Axmad Cilmi Cismaan (Axmad Karaash) oo maanta booqdey deegaanka Tukaraq oo ay ku sugan-yihiin ciidamada Puntland, uuna socdalka ku waheliyey wasiirka Beeraha Cabdi ismacil Boos iyo xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa ku baaqay dagaal ka dhan ah Somaliland.
“Waxaan u sheegaya shacabka Puntland dalkiini baa la soo galay inbadana waad daawaneysen,dowladduna dib uma daawaneyso,shacabka waxaan ka rajeynaya inay kacaan oo ay dhulkoodii soo ceshadaan””ayuu yiri Axmed Karaash.
Maamulka Somaliland ayaa dhowr maamlood ka hor dib u qabsaday degmada Taleex ee gobolka Sool, iyagoo halkaas ka kala ceyriyey boqolaal ergo ah oo shir maamul Soomaalinimo aamisan ku qabasan lahaa halkaas.